Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Rum dia ny sakafonao, alikaola ary ny fomba fiaina New York
culinary • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Vonona ho vonona
Ny Rum dia azo apetraka ao anaty vondrona FOOD, rehefa dinihina tokoa - vita tamin'ny singa fary iray manontolo izy io; mety hoheverina ho tsindrin-tsakafo mihitsy aza, satria mamy izany. Na izany aza, fanahy izy io ary napetraka eo amin'ireo zava-pisotro misy alikaola miaraka amin'ny tombony miavaka izay misy ny toetra mampiavaka ny bakteria, ary nanolorana azy ho hitsaboana tenda.
Ny ron-kena sasany dia mahasalama kokoa noho ny sasany ary, rumo maizina, avela ho antitra amin'ny hazo terebinta na barika hazo manome loko miloko kokoa sy matsiro matanjaka kokoa, dia heverina fa manolotra antioxidants mahasalama.
Ny fikarohana sasany dia milaza fa ny rum dia manana fananana mety hanampy amin'ny fiarovana ny sela ao amin'ny ati-doha.
Mety hampihena ny risika mifandraika amin'ny dementia sy Alzheimer (David Friedman, Food Sanity: Ahoana ny fihinananana amin'ny tontolon'ny lamaody sy angano).
Inona no atao hoe Rum?
Ny ronono dia vita amin'ny vokatra fary toy ny molotra na siramamy fary. Ny siramamy dia alefa ao anaty alikaola misy ranoka amin'ny tanjaka isan-karazany ary ny alikaola amin'ny alàlan'ny volume (ABV) dia mitentina 40-80 isan-jato, manome 97 kaloria eo ho eo isaky ny 8 Oz. tifitra porofo 80 (miaraka amin'i Coke, ampio kaloria 88 hafa). Ny kalitaon'ny rum dia mifototra amin'ny firafitry ny molotra, ny halavan'ny fermentation, ny karazana barila ampiasaina, ary ny halavan'ny fotoana ampiasaina amin'ny fahanterana amin'ny barila.
Ny tsiranoka dia mizarazara amin'ny loko (izany hoe fotsy, mainty / maizina, volamena, tsy mahazaka loatra), tsiro (izany hoe, manitra / manitra) sy ny taonany. Ny rum maizina dia efa antitra 2+ taona amin'ny barila oaka arina mamorona loko mainty / volontany (tsy voasivana manaraka ny fizotry ny fahanterana). Ny ronono volamena na andramena dia antitra ao anaty barila oaka mirehitra mandritra ny fotoana fohy kokoa (18 volana). Karmel dia azo ampiana aorian'ny fizotran'ny fahanterana hanomezana loko volamena mazava kokoa. Rov fotsy (fantatra amin'ny anarana hoe volafotsy, maivana na mazava) dia matetika no ao anaty sambo vy na baoritra ary antitra mandritra ny 1-2 taona miaraka amin'ny sivana arina ampiasaina hanalana ny loko sy ny loto rehetra aorian'ny fizotry ny fahanterana ary manana tsiro maivana kokoa noho ny honahona na tsoka maizina ary matetika hita ao anaty cocktails fa tsy levona tsara. Romanina manitra ampidirina mandritra ny dingana fampifangaroana amin'ny kanelina, aniseed, sakamalao, rosemary na dipoavatra amin'ny fifangaroana hatramin'ny 2.5 isan-jato. Romanina manitra matetika maizina ny lokony misy siramamy na karamela indraindray ampiana ho mamy.
Rum mifandray amin'ny fanandevozana, fikomiana ary aretina
Na dia matsiro aza ny ron-kena ary mampifangaro antoko sy barbeque, ny zava-pisotro dia manana tantaram-piainana mainty be. Ny tantara dia mampifandray ny rum (rehefa namboarina tamina fambolena fary tamin'ny taonjato faha-17) sy ny fanandevozana izay nanerena ny olona hamboly sy hanapaka fary amin'ny toe-javatra mahatsiravina. Noterena hiasa tsy an-kijanona ireo mpiasa mba hanisy masirasira sy handraraka molas mba hanaovana ilay ronono izay nampiasaina ho vola hividianana andevo bebe kokoa.
Tany am-piandohana (ary nandritra ny taonjato maro), ny kalitaon'ny vokatra dia noheverina ho mahantra sy lafo vidy, lanin'ny andevo fambolena fary ary mifamatotra amin'ireo vondrona sosialy sy ekonomika ambany. I Rum dia nitana andraikitra lehibe ihany koa tamin'ny fanonganam-panjakana miaramila tokana nitranga tany Aostralia, ny Fikomiana Rum (1808), rehefa niongana ny governora William Bligh noho ny fiezahany hanafoana ny fampiasana rum ho fomba fandoavam-bola.
Ny varotra andevo trans-Atlantika dia nijanona tamin'ny taonjato faha-19, kanefa, mbola mitohy ny fanandevozana maoderina (izany hoe ny indostrian'ny fambolena sy ny lamba dia manome). Hitan'ny Departemantan'ny asa any Etazonia fa ny fampiasana ankizy dia manjaka amin'ny famokarana fary any amin'ny firenena 18. Amin'ny toeram-pambolena sasany, ny mpiasa dia manapaka ny tehina amin'ny tanana amin'ny alàlan'ny hafanana mahery vaika izay miteraka risika ara-pahasalamana. Ny fikarohana dia mahita fa ny fihenjanana amin'ny hafanana dia mety hitarika amin'ny fivoaran'ny aretina mitaiza sy matetika mahafaty.
Hitan'ny Market Data Forecast fa ny tsenan'ny rum eran-tany dia mitentina US $ 25 miliara (2020) ary vinavinaina hitombo ho 21.5 miliara dolara amin'ny 2025. Manerantany ny fidiram-bola isan-taona amin'ny famokarana rum dia tombanana ho 15.8 miliara dolara (2020) miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana 7.0 isan-jato pa amin'ny vanim-potoana 5 taona (2020-2025) satria mitombo ny fangatahana eran-tany ho an'ny vokatra fanahy avo lenta sy lafo vidy miaraka amin'ny fifantohana amin'ny mari-pahaizana sy marika malaza.
Etazonia no mpanjifa rumana be indrindra miaraka amin'ny 2435 tapitrisa dolara azo amin'ny fidiram-bola (2020) ary ny volan'ny varotra dia faharoa amin'ny vodka sy whisky ao amin'ny sokajy fanahy. Ny tena mpamokatra roma dia ny firenena any Amerika Latina sy Karaiba; na izany aza, Etazonia dia manana fanombohana maro amin'ity sokajy ity ary koa any Filipina, India, Brezila, Fidji ary Aostralia. Hitan'ny Euromonitor International fa i India no mitarika ny tsena rum iraisam-pirenena.
Fanovana / fanamby ho an'ny Rum
Ny sokajy rum vaovao dia anjakan'ny millennial (olona teraka teo anelanelan'ny 1981 sy 1994/6) satria ny rum dia zava-pisotro somary lafo raha oharina amin'ny fanahy hafa. Ity tsena kendrena ity dia manana fahefana mandany ary maneho fankasitrahana ny alikaola miaraka amin'ny safidin'ny rum (noho ny zava-pisotro misy alikaola hafa). Manery ny hiova rum izao tontolo izao satria mitady vokatra misy siramamy mihena ny mpanjifa, maharitra ary amin'ny ambaratonga premium. Nanamboatra vokatra vaovao any an-tsena ny mpanamboatra tsako ary niainany ny tsiro mifantoka amin'ny tsiro izay manome manitra, voasarimakirana, karamela, voankazo tropikaly, ary lavanila izay miafara amin'ny licorice smokey sy molotra.
Mety tsy fahalalana iraisana io, fa famokarana rum betsaka firenena ao Karaiba AZA hamboly fary ho azy ireo ary tena manafatra fary, ranom-boankazo na molotra satria ny fototr'izy ireo sy ny fanafarana dia mamorona fanamby vaovao ho an'ireo firenena nosy ireo.
1. Molasses, vokatra azo avy amin'ny famokarana siramamy dia mora vidy kokoa noho ny tamin'ny fampiasana fary madio amin'ny famokarana ron-kena; na izany aza, rehefa mihena ny filan'ny siramamy dia mihena ny famokarana siramamy noho izany dia vitsy ny molotra azo aondrana. Ny fangatahana mihena ihany koa dia manosika ny vidin'ny fary ary mety hanjavona tanteraka ireo mpamokatra tsiranoka amin'ny famoahana molatra satria miala amin'ny fary ny tantsaha hahazoana vokatra fambolena mahasoa kokoa. Misy ihany koa ny mety hisian'ny fisondrotana fahasalamana hampirisika ny governemanta na ny masoivohom-panjakana hafa hametraka fetran'ny siramamy misy fiatraikany amin'ny fisian'ny siramamy sy ny vidin'ny vokatra vita.
2. Ny fizotry ny famokarana maharitra dia zava-dehibe amin'ny mpanjifa zava-pisotro vaovao satria manahy ny hanome fahafaham-po ny filany eo noho eo / ny filany avy hatrany izy ireo nefa tsy hampidi-doza ny ho avy. Ny famokarana Rum dia manana ny lazany amin'ny famokarana fiatraikany amin'ny tontolo iainana avo lenta noho ny tany takiana amin'ny fambolena ny tehina, ny solika dia nitaky ny hamoronana hafanana hamadihana ny fary siramamy manta ho lasa mpanamory ary ny habetsaky ny rano ampiasaina amin'ny famokarana miampy ireo loharano ampiasaina fonosana. Mba hamaliana ny fitakiana faharetana, ny indostria dia tsy maintsy mandinika fomba vaovao amin'ny fitantanana ny loharano sy / na ny fitehirizana ary mamorona fonosana izay mora simba na sariaka amin'ny tontolo iainana.
Ho an'ireo orinasa vonona sy afaka mandeha lavitra, ary hiatrika ny fitakiana ankehitriny, dia misy vaovao tsara satria ny mpanjifa vonona ny handoa ny sarany premium amin'ireo vokatra vaovao miaraka amin'ny super-premium ary mihoatra ny fanasokajiana. Golden Rum dia vonona ny ho fironana lehibe manaraka amin'ny sokajy fanahy, miaraka amin'ny varotra efa nandrasana nitombo 33 isan-jato tamin'ny 2021. Amin'ity taham-pivoarana ity dia handresy ny gin amin'ny 2022 (internationaldrinkexpo.co.uk).
New Yorkers mandray an'i Rum
Tamin'ny fivorian'ny Kongresy Rum tany Manhattan farany teo, Federico J. Hernandez sy TheRumLab dia namolavola programa mahaliana sy fanabeazana miaraka amin'ny fanandramana olona avy amina tsaho iraisam-pirenena izay nankafizin'ny namana sy mpankafy rum an-jatony. Ireo tsaho vaovao dia manolotra traikefa mahatsapa izay mihaona ary matetika mihoatra ny antenaina.
Tafiditra ao ny programa:
Will Groves, Rum Maggies Farm. Pittsburg, PA
Otto Flores, Ruman'ny Barcelo, Repoblika Dominikanina
Ian Williams, mpanoratra, Rum: tantaram-piainana ara-tsosialy sy ara-tsosialy momba ny tena fanahin'ny 1776
Ny Fetiben'ny Rum manaraka dia voalahatra ho an'ny septambra 2021, San Francisco, CA. Raha mila fanazavana fanampiny: californiaiarumfestival.com
Trondro Kathy hoy:
September 5, 2021 ao amin'ny 13: 56
Toa safidy tsara amiko!